Ahoana no nahatonga an'i Nizeria ho lasa tsara tamin'ny Scrabble mpifaninana?
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ahoana no nahatonga an'i Nizeria ho lasa tsara tamin'ny Scrabble mpifaninana?
Scrabble dia lalao filalaovana amin'ny tabilao 225 toradroa misy taila misy litera izay misy mpilalao roa ka hatramin'ny efatra mifaninana amin'ny famoronana teny izay tsipelina amin'ny litera amin'ny tile mifampitohy toy ireo amin'ny piozila. Taratasy iray ihany no afaka tafiditra ao amin'ny habaky ny kofehin-taratasy 100 ary samy manana ny sandany isa ny litera tsirairay.
Ny mpilalao dia takiana amin'ny fakana taila fito avy amin'ny pisinina iray eo am-piandohana ary hameno ny sakafony aorian'ny fihodinana tsirairay amin'ny taila ao anaty pisinina ary ny an'ny mpilalao hafa dia takona afenina mba ho hitan'ny mpilalao fotsiny ny taila sy ireo eny amin'ny solaitrabe.
Raha te-isa ireo teny, dia asiana isa ny isa ny taratasin'izy ireo, avy eo ampitomboina amin'ny efamira premium 61 izay mety ho rakotra toy ny litera roa, litera telo, teny roa ary teny telo.
Nizeria, ny firenena be mponina indrindra eto Afrika dia ny firenena matanjaka indrindra scrabble. Nizeria no laharana ho firenena milalao scrabble ambony indrindra arahin'i Etazonia
Ny ekipa nasionaly scrabble nizeriana dia nibata ny amboara Tompondaka eran-tany eran-tany anglisy Wables Association (WESPAC) tamin'ny taona 2019, nahatonga ny ekipa hitana ny anaram-boninahitra fanintelony.
Io no firenena afrikanina tokana nahazo ny tompondaka hatramin'ny nanombohan'ny WESPAC tamin'ny 1991.
Ny ekipa West Africa Scrabble dia nahita fiakarana haingana tao anatin'izay taona maro izay. Ny ekipa avy eo nahavita ny faha-11 tany Malezia tamin'ny taona 2009 ary ny fahatelo tany Mumbai tamin'ny 2007. Nahazo ny tompon-daka tamin'ny taona 2015 i Nizeria avy eo tamin'ny taona 2017 ary nandresy an'i Lewis Mackay avy any Grande-Bretagne i Wellington Jighere tamin'ny famaranana mba ho tompondakan'i Afrika sy Nizeria voalohany indrindra eran-tany . Tany Afrika, nandrombaka ny tompon-daka Afrika Afrikanina Scrabble 2018 tany Kirinyaga Kenya i Moses Peter, nanome ny amboara ho an'ny tsirairay sy ny firenena i Nizeria nandritra ny fotoana faha-12 nisesy.
Mahagaga ihany ny manamarika fa nahavita nanjakazaka tamin'ny sehatra manerantany i Nizeria tamin'ny fifaninanana mifototra amin'ny Anglisy rehefa manana fiteny 200 eo an-toerana sy fiteny 400 ampiasaina sy fiteny anglisy ho fiteny ofisialy amin'ny maha zanatany anglisy taloha azy ny firenena afrika Andrefana.
Araka ny lazain'ny Quartz Africa, ny klioba dia miforona ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amina mpilalao fito fotsiny izay eken'ny firenena hatramin'ny mpilalao rehetra ao amin'ny klioba misy mpilalao mihoatra ny 4,000 amin'ny klioba Scrabble mihoatra ny 100 miparitaka manodidina an'i Nizeria.
Tsy toy ny governemanta afrikanina hafa, ny governemanta afovoany nizeriana dia nanaiky ny scrabble ho fanatanjahantena tamin'ny fiandohan'ny taona 90, ary misy fotodrafitrasa napetraka ho an'ireo mpilalao sy mpanazatra amin'ny karama sy fifaninanana tohanan'ny vola fanampiana.
Na dia nomena fankasitrahana tao amin'ny firenena mihoatra ny 25 taona lasa aza ny lalao, dia nilaza ireo mpilalao eo an-toerana, mpanazatra, ray aman-dreny, tompon'andraikitra, ary mpikarakara fifaninanana fa tsy mifanaraka ny fanampiana avy amin'ny governemanta, ary betsaka ny zavatra tokony hatao hanohanana, hanohana ary hamatsy vola an'i Scrabble.
Raha toa ka misy ny fanohanan'ny governemanta sy ny asa soa, ny fifaninanana scrabble dia notohanan'ny Nizeriana, orinasa ary klioba scrabble manan-karena ankehitriny.
Voamarina ihany koa fa mampiasa paikady filalaovana teny fohy kokoa ny Nizeriana na dia misy teny lava kokoa aza. Ity paikady ity dia nahatonga azy ireo hanjakazaka tamin'ny fifaninanana nahitana ireo Nizeriana 13 nalahatra tamin'ny 50 voalohany manerantany
Teny dimy litera 'felty' no naharesy an'i Jighere tamin'ny isa 36 tamin'ny famaranana niaraka tamin'i Lewis Mackay tamin'ny taona 2015. Nifaninana hampianatra an'i Scrabble any amin'ny sekoly tsy miankina isan-taona ny corporates izay manana lalao playoff amin'ny lalao klioba, lalao interclub, lalao zonal, kilalao tanora, oniversite lalao, lalao amin'ny anjerimanontolo, lalao polytechnic, lalao banky any Nizeria, lalao telecoms Nigeria, ary lalao ho an'ny mpanjifa mandeha haingana.
The Finderan'ny scrabble Ampianarina any amin'ny sekoly 50 mahery ao amin'ny firenena ankehitriny ny tompon'ireo sekoly manery ny minisiteran'ny fanabeazam-pirenena any Nizeria mba hampianatra scrabble any amin'ny sekoly rehetra ao amin'ny firenena mba hamoronana fotoana bebe kokoa sy hanatsarana ny rafi-pampianarany. Lalao mitovy amin'izany Teny amin 'ny Friends nahazo laza noho ny firongatry ny lalao.
Nisy vondrona Facebook iray nikarakara ny fifaninanana nataony aza nipoitra tamin'ny 2015 nantsoina hoe Nigeria Scrabble Friends (NSF) nitondra fifandonana teo amin'izy ireo sy ny tena NSF nitaky ny fanovan'ny mpanorina ny anarana, saingy nolaviny ny ady hevitra fa tsy hampiseho firaiketam-po sy fifandraisana akaiky eo amin'izy ireo izany.
Ankoatr'izay, ny faran'ny herinandro sy ny fifaninanana tontolo andro dia tanterahina tsy tapaka miaraka amin'ireo tanora mpilalao vao misondrotra ho tompondaka amin'ny zon'izy ireo. Nizeria koa dia nantsoina ho firenena be zotom-po indrindra eto amin'izao tontolo izao ary i Lagos no ivon-toerany.